मनै रु’वाउने घ’ट’ना : तिहारको मुखमा ३ छोराहरुको मृ:त्यु, सो:कमा डु’ब्यो परिवार ! - Onlines Time
तिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृ:त्यु, सो:कमा डु’ब्यो परिवार २ दिन अघि तुलसीपुर दाङमा ट्रकले ठ;क्क’र दिँदा तीन जनाको मृ:त्यु भएको थियो । राप्ती गाउँपालिका वडा नं ४ मौरीघाटमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३३४४ नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आइरहेको रा ५ प ६७४४ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठ:क्क:र दिँदा मोटरसाइकलमा सवार तीन जनाको घ:ट’ना’स्थलमै मृु:त्यु भएको हो ।
मंगलबार राति ८ बजेतिर उक्त दु:र्घ’ट’ना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काले बताउनुभयो । मृु:त’क तीन जना मनोज गाहा मगर, कसम पुन मगर र क्रोनिज जि मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । श:व परीक्षणका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग आफन्तले ठ:प्प पारेका छन् ।
पूर्ववाट पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ४ मौरीघाटमा बेलुका पौने ८ बजेतिर ट्रकले मोटरसाइकललाई ठ:क्क’र दिएपछि ट्रक पनि सडकमै प:ल्टिएको छ। तीव्र गतिका कारण उक्त दु:र्घ:ट:ना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। मृतक तीनै जना युवाको श:व पोष्टमार्टमका लागि लमही अस्पतालमा राखिएको छ
कार लिएर हराएका भक्तपुरका डाक्टर काभ्रेमा फेला परेका छन् । उनी विहानै ५ वजे परिवारका सदस्यलाई फोन गरेर हिडेका थिए । उनको फेसवुकमा पनि सु’सा’इड नोट देखिएको थियो । भक्तपुरवाट विहानै हराएका भनिएका दन्तरोग विशेषज्ञ डा दिगम्बर झा काभ्रेमा फेला परेका हुन् ।
भक्तपुरको राधेराधेबाट हराएका डा दिगम्बर झा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका-१० स्थित अरनिको राजमार्गमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनले परिवारका नाममा नोट पनि लेखेका थिए । परिवारसंग राम्रो सम्बन्ध नभएका उनले पारिवारीक कारणले नै आफ्नो जिवन त्याग गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नोट लेखेका थिए ।
डा। झाको बुबा–आमा र दिदी–बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो नरहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट खुलेको छ । उनले आफुले परिवारकै कारण मृ त्यु रोजेको पनि नोटमा लखेका छन् ।
उनी बा १६ च ८६८९ नम्बरको कार लिएर गएका थिए । प्रहरी श्रोतका अनुसार काभ्रेको पनौती पुगेपछि उनको मोवाइल अफ भएको देखिएको थियो ।
आफन्तले टिपाएको बा१६च ८६७९ नम्बरको कारलाई देखेपछि स्थानीय प्रहरीले उनलाई भेटेको महानगरीय प्रहरी परिसर, भक्तपुरका डीएसपी दीपक गिरीले पुष्टि गरेका छन् । उनी निरास अवस्थामा बसेको देखिएका थिए ।
Prevनेतालाइ देश सुम्पेको केही बर्षमै देश खोक्रो बनाए भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले लिए यस्तो निर्णय …पूरा हेरि सक्दो शेयर गरौ
Nextमलेसियामा कार्यरत सल्यानका रुपलाल कुँँवरको सु* तेकाे सुतै अव’स्थामा मृ* त्यु।